အသစ်ပြန်ဖွင့်ပြီ အလုပ်သများပန်းရောင်ကဒ် အလုပ်သမားများ
MOU စာအုပ် ၂ နှစ်နှင့် ၄ နှစ်ပြည့်သွားသောစာအုပ်များသည် အလုပ်ရှင် မတူ သူဌေးပြောင်းလို့မရ အလုပ်ထွက်စာမရှိသောသူများ ပထမအသုတ်ပန်းရောင်ကတ်သက်တမ်းသူများ
(4 အော်ဂတ်လ 2020 ဥပဒေအရ အခွင့်ရေးရရှိသည်)
ဖုန်းနံပါတ် 0827182357 , 0824425012 , 0875569117 ,
ပွဲစားများက စျေးပိုသက်သာပါလျက် ငါတို့ဘာကြောင့်ရွေးချေရမှာလဲ
ကျွန်တော်တို့သည် အလုပ်သမားစာရွက်စာတမ်းပြုလုပ်ရန်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်
ကျွန်တော်တို့၏ နောက်ဆုံးပေါ်စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်အား လတ်တလောဖွင့်ကြည့်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားပါသည်
MOU သက်တမ်း2နှစ်နှင့် ၄ နှစ်ပြည့် သူဌေးမတူ အလုပ်ထွက်စာသက်တမ်းသေဆုံး၍
အလုပ်သများ ၂၀ ယောက်အထက်ရှိပါက အထူးလျှော့စျေးရှိသည် အထူးစုံစမ်းမေးမြန်းလေ့လာနိုင်ပါသည်
ဝန်ဆောင်ခ, ကုန်ကျငွေ နှင့် ဗီဇာနှင့် ဝတ်ပါမစ်ကျန်ကျစရိတ်နုန်းထားများ MOU သက်တမ်း2နှစ်နှင့် ၄ နှစ်ပြည့် သူဌေးမတူ အလုပ်ထွက်စာသက်တမ်းသေဆုံး၍သူဌေးပြောင်းမရသောစာအုပ် ပန်းရောင်ကဒ်တော်ရန်မမှီလိုက်သောသူများ
ဒီစျေးနူန်းသည် ကုန်ကျမူအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ပေးချေစရာမလိုတောပါ၊ ပွဲစားများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သောစျေးနုန်းများဖြင့် ကောက်ယူပြီး နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများပြုလုပ်ပြီးငွေထပ်မံ ကောက်ခံမူအား သင့်အနေဖြင့် ခိုင်မာစွာကာကွယ်သင့်သည်
ဗီဇာ ဝတ်ပါမစ်တော်ရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ MOU သက်တမ်း2နှစ်နှင့် ၄ နှစ်ပြည့် သူဌေး မတူတဲ့စာအုပ် သူဌေးပြောင်းလဲလို့မရတဲ့စာအုပ် အလုပ်ထွက်စာရွက်မရှိတဲ့စာအုပ် ပန်းရောင်ကဒ်တော်ရန်မမှီလိုက်သောသူများ
ဗီဇာ ဝတ်ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာကဏ္ဉMOU သက်တမ်း2နှစ်နှင့် ၄ နှစ်ပြည့် သူဌေးမတူ အလုပ်ထွက်စာသက်တမ်းသေဆုံး၍ သူဌေးပြောင်းမရသောစာအုပ် ပန်းရောင်ကဒ်တော်ရန်မမှီလိုက်သောသူများ
***ပထမအဆင့်ကို ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ နေ့တွင်စတင်ရမည်
သင့်စာအုပ်အားဗီဇာသက်တမ်းတိုးရန် လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးရုံးသို့ယူလာပါ ***
အဆင့် ၂ မှ ၅ ကို ၃၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၂၁ တွင်ပြီးစီးရမည်
**၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ မှ ၃၁ မေလ ၂၀၂၁ နေ့အတွင်း ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ရမည်
ဗီဇာ 31 မတ်လ 2021 (၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပန်းရောင်ကဒ် နှင့် ဗီဇာ တော်ရန် အုပ်စု)
ဝတ်ပါမစ်အား 31 မတ်လ 2022 အထိရရှိမည်
အဆင့်အားလုံးပြီးစီးသွားပြီးနောက် ပန်ရောင်ကဒ်သက်တမ်း ၂၀၂၀ တော်ပြီးနောက်ပိုင်း သင်စဥ်းစားရမည့် အချက် ၃ ချက်
ပကန်ဆောင်ခွင်ရှိသူ 1-5ယောက် ကုန်ကျငွေ 8,500 ဘတ်
ပကန်ဆောင်ခွင်ရှိသူ6–9ယောက် ကုန်ကျငွေ 8,000 ဘတ်
ပကန်ဆောင်ခွင်ရှိသူ 10 ယောက် ကုန်ကျငွေ 7,500 ဘတ်
ပကန်ဆောင်ခွင်မရှိသေးသောသူများ ကျမ်းမာရေးအာမခံ3လ အတွက် နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကို 500 ဘတ်ပေးရမည်
(အိမ်အကူ) ပကန်ဆောင်ခွင်မရှိသောသူများ ကျမ်းမာရေးအာမခံ2နှစ် အတွက် နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကို 3,200 ဘတ်ပေးရမည်
ဗီဇာ 31 မတ်လ 2021 နေ့အထိ
ဝတ်ပါမစ် 31 မတ်လ 2022 နေ့အထိ
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမူ (ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမူ ၂ ကြိမ်ကုန်ကျစရိတ်)
(အမျိုးမျိုးသောအခကြေးငွေကြောင့် အေဂျင်စီတစ်ခုချင်းစီကို ပေးရမည့်ငွေပမာဏကို ရှေ့ဆက်မလုပ်ခင်ငွေပေးချေရမည်)
ရက်ပေါင်း 60- 90 အတွင်း
ရိုးရိုးသူဌေး (5) စောင်း
ကုမ္ပဏီ (၅) စောင်
2. သူဌေးမှတ်ပုံတင်မိတ်တူ (တာဝန်ခံသူဌေး)
3. သူဌေးအိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ်တူ (တာဝန်ခံသူဌေး)
1. မှတ်ပုံတင်မိတ်တူ (အိမ်ပိုင်ရှင်)
2. အိမ်ထောင်စုစာရင်း ( အိမ်ပိုင်ရှင်)
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစာချုပ် သက်တမ်း ၂ နှစ်ထက်မကျော်ရ
အိမ်ထောင်စုစာရင်း နှင့် စာချုပ်ပါနေရာ၌ ဆောက်လုပ်နေသောမြေဂရမ်
တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စာရွက်စာတမ်းများ အိမ်ငှားဂရမ်းစီးပွားဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသောစာရွက် စာတမ်းများ
2. မှတ်ပုံတင်မိတ်တူ (အိမ်ငှားရမ်းသူ)
3. အိမ်ထောင်စုစာရင်း (အိမ်ငှားရမ်းသူ)
အလုပ်သမားဓါတ်ပုံ 1 လက်မခွဲ နှင့် ၂ လက်မ6ပုံ နောက်ခံအဖြူရောင်း
ပတ်စပို့ မိတ်တူ / ဗီဇာမိတ်တူ